Otu esi eme nkwado nke IMEI nke gam akporo gi | Gam akporosis
Na nkuzi ọzọ bara uru nke m mere obere oge gara aga, akuziri m gị site na TWRP Iweghachite, esi ndabere EFS nchekwa, ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, a ndabere IMEI gị gam akporo ọnụ ka mfe echebe ma weghachi ya bụrụ na nke IMEI ọnwụ.
Oge a aga m akọwara gị otu usoro ahụ mana na-enweghị iji gbanwetụrụ Mgbake usoro, naanị ya na ọdụ ya na ngwa n'efu anyị nwere ike ibudata na directlylọ Ahịa Google Play anyị ga-enwe ihe zuru ezu.
Ngwa a na-aza maka aha EFS ☆ IMEI ☆ Ndabere Dị ka m gwara gị, anyị ga-enwe ike ịnweta ya kpamkpam na gọọmentị ngwa ngwa Google maka gam akporo.
Gini kpatara iji chekwaa IMEI nke Android terminal anyi?
Ndabere ma ọ bụ ndabere IMEI gị gam akporo ọnụ Ọ dị oke mkpa, ọkachasị maka ndị ọrụ ahụ niile na-achọ ịnwale Rom esiri ọhụrụ ma ọ bụ wụnye ọdụ ụgbọ mmiri nke ngwa ahụ site na mgbake ahụ ekwuru na mbụ. The IMEI nke anyị gam akporo ọnụ bụ na a nchekwa ma ọ bụ nkebi usoro aha ya bụ EFS enwere ike ịchọta ya n'ebe dị iche iche dabere na ika ma ọ bụ ihe nlereanya nke ọnụahịa gam akporo.
Na ọnụ Samsung folda a bụ nkebi nke dị na ya mgbọrọgwụ nke usoro, ọ bụ ezie na na ọnụ dị ka LG ma ọ bụ Sony ọnọdụ a gbanwere. Mụta otú lelee IMEI na Samsung na njikọ m hapụrụ gị.
Ndabere nke IMEI Ọ dị mkpa ime ya na ọnụahịa gam akporo gị, n'ihi na ọ bụrụ na anyị atụfu data a ma ọ bụ hichapụ ya, ọ gaghị ekwe anyị omume ịdebanye aha na netwọkụ ekwentị ọ bụla n'ụwa, na-ahapụ ngwaọrụ anyị enweghị isi n'ihe gbasara njikọ data, oku na ozi.
con EFS ☆ IMEI ☆ Ndabere anyị ga-enwe ike imezu a IMEI ndabere nke gam akporo anyị site na interface dị mfe nke ngwa ahụ na site na ịpị bọtịnụ dị mfe, ma ọ dịkarịa ala na njedebe Samsung, Na ọdụ ndị ọzọ ọ ga-adị mkpa iji tinye nhọrọ Ngalaba Ndabere ma họrọ akụkụ nke EFS site na ebe ahụ.
Kedu ka ị ga - esi lelee ya site na onyogho dị n’elu onwe ya, ewezuga inwe ohere nke mee nkwado nke IMEI nke gam akporo anyi, ọ na-enye anyị nhọrọ ịhọrọ mkpakọ ma ọ bụ ịrụ a ndabere ọ bụla usoro nkebi nke faịlụ site na gam akporo anyị.
Ngwa na-adọrọ nnọọ mmasị site na ebe a Gam akporosis Anyị na-akwado gị nke ọma, ọ bụkwa ya Ọ dịghị ihe ọ ga-efu iji gwọọ onwe anyị na ahụ ike ka anyị wee ghara ịkwa ụta ma emechaa, karịsịa ndị ọrụ mgbọrọgwụ na ndị raara onwe ha nye na tinkering na gam akporo anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Root » -Esi mee nkwado ndabere nke IMEI nke ọnụ gị dị nnọọ mfe
Nnọọ uru, ekele Francisco.
Ekele, enwere m olile anya na anaghị m eweghachite ha: 3
Zaghachi José Angel
Christmas na-abịa Hay Day na ọtụtụ ọhụrụ atụmatụ: ọbọgwụ mmiri, ọbọgwụ ejiji andlọ Mmanya na ọtụtụ ndị ọzọ
Etu ị ga-esi nwee Taskbar Windows ma bido NchNhr na gam akporo